China SPC Floor SM-055 Ukwakha kanye nefektri | I-Aolong
Ngoba isitayela sesimanje saseMelika, isitayela esisha samaShayina silungele kakhulu iphansi elibomvu lensimbi phansi, igumbi lokulala libukeka lilihle ngokwengeziwe. Iphansi lezinkuni elinsundu ngokubomvu nalo lingaba lihle ngokwengeziwe, ngoba nalokhu kufaneleke kakhulu, ukufanisa umoya omncane, ifenisha yokuthambisa, kungenza umuntu azizwe ikamelo lokulala ekhaya lihle kakhulu. Ngokungeziwe kumbala, indlela yokwakha ukhuni phansi nayo iyindawo enkulu yokukhanya, njengokuthi kuvuleke okumise okwenziwe nge-I kanye nokuvulelwa kobungani izindlela ezimbili ezivamile zokuvula, ubuchwepheshe bokucubungula buzoba lula. Amapheyinti enhlanzi namatshe wepuleti yenhlanzi azoba nzima kakhulu. Yize ziheha ngokwengeziwe, ukusetshenziswa kuzoba ngaphezulu. Kuphakanyiswa ukuthi sikhethe indlela ye-paving ngokuya ngesabelomali sethu sezindleko.
Insimu yethu yokufaka isicelo ibanzi, ukumelana nokungcola, ukumelana ne-asidi ne-alkali kuhle, ukugcinwa mahhala.
(1) Gqoka ukumelana nokwethembeka: indawo yaphansi eqinisiwe ungqimba olungagqokiwe, olwakhiwa ngokulinganayo okusatshalaliswe i-aluminium oxide, engafinyelela amandla aphakeme, futhi ihlala iklwebheka ngamabhulokhi abukhali anjengokhiye, futhi lapho njalo amamaki angajulile kakhulu. Ukumelana kokungcola kwemvelo, ukumelana nokugqwala, amandla acindezelayo kanye nokumelana nomthelela kwesitezi esiqinisiwe kungcono kunezinye izinhlobo zaphansi kwezinkuni.
(2) Okungabizi kakhulu kuphezulu: ungqimba olungagqoki, ungqimba lomklamo wokuhlobisa nongqimba lwalo lokulinganisa lwaphansi oluqinisiwe luphrintwa ngamaphakeji womuntu. Izinto eziyisisekelo zenziwe ngezinto zehlathi ezikhula ngokushesha. Izindleko zishibhile kunalezo zepulangwe langempela, futhi zingathuthukiswa.
Langaphambilini SPC Phansi SM-028
Olandelayo: SPC Phansi SM-056
SPC Phansi SM-050